विवाहपछि महिला किन मोटाउँछन् ? - धादिङ जिल्लाको पहिलो अनलाइन खबर पत्रिका
विवाहपछि महिला किन मोटाउँछन् ?
प्रकाशित मिति: २०७४, ५ असार सोमबार १७:४३
एजेन्सी । द ओबिसिटी नामक एक जर्नलमा प्रकाशित अध्ययन अनुसार विवाहपछि करिब ८२ प्रतिशत जोडी मोटाउँछन् । विवाहको ५ वर्षमा १० किलोसम्म तौल बढ्ने गरेको भेटिएको छ । अध्ययनमा पुरुषको भन्दा महिलाको तौल अत्याधिक बढ्ने गरेको पाइएको छ । यस्ता छन् विवाह पछि तौल बढ्ने १० कारण :
७ खानामा परिवर्तनः खान खाने तरिका, परिकार र समय घरपिच्छे फरक पर्छ । विवाह पछि आएको घरको खानपान त्यसअघिको जस्तो नहुँदा पनि मोटोपनको शिकार भइन्छ । विशेष गरी घरको नयाँ सदस्य भएका कारण परिवारका सदस्यले सुरुमा धेरै खान प्रोत्साहन गर्ने भएकाले पनि मोटोपन बढ्न थाल्छ । स्वास्थ्य खबरपत्रिका
२०७४, ५ असार सोमबार १७:४३ मा प्रकाशित